Taliyaha Booliska Soomaaliyed oo Doxa kula kulmay Sh. Abdalla Bin-Nami Bin Khaliifa Al Thani (Daawo Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/ Gaas Maxamed Shiikh Xasan Xaamud oo booqasho ku jooga magaalada Doha ee dalka Qadar ayaa kulan la qaatay masuuliyiin sare iyo saraakiil ka tirsan dowlada wadankaas.
Masuuliyiinta uu Taliye Xaamud la kulmay ayaa waxaa ka mid ah taliyaha Booliska dowlada Qadar Xamad Bin Jaasim bin xamad Al-thani iyo Ra’isal wasaaraha Qadar ahna wasiirka Arimaha Gudaha ee dalkaasi Abdalla Bin-Nami Bin Khaliifa Al Thani.
Taliye Xaamud ayaa kala hadlay mas’uuLiyiinta uu la kulmay sidii dowlada Qadar ay uga qeyb qaadan laheyd dib u dhiska ciidanka Booliska Soomaaliyeed, waxaana kulanka labada dhinac sidoo kale la iskula soo qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood.
Diyaarado dagaal oo duqeeyay Saldhig Shabaab ku leeyihiin duleedka Afgooye